Mpaghara: Wulite Dọkata desktọọpụ iji Zụlite ma mekọrịta Ebe nrụọrụ WordPress gị
Ọ bụrụ na ịmeela ọtụtụ mmepe WordPress, ị maara na ọ na-agbanwekarị ngwa ngwa na ngwa ngwa ịrụ ọrụ na desktọọpụ ma ọ bụ laptọọpụ mpaghara gị karịa ichegbu onwe gị mgbe niile banyere ijikọ remotely. Na-agba ọsọ na sava nchekwa data nwere ike ịbụ nnukwu ihe mgbu, mana ọ dị ka ịtọlite ​​MAMP ma ọ bụ XAMPP iji bido sava weebụ dị na mpaghara, nabata asụsụ mmemme gị, wee jikọọ na nchekwa data gị. WordPress dị mfe site na ije
Nchịkọta WordPress na-agba ọsọ? Gaa na Ijikwa Bochum
Agbanyeghi na otutu otutu ihe kpatara na ntinye WordPress gi na agba oso (dika ihe edere ede na ederede), ekwenyere m na otu ihe kacha eme ka ndi mmadu nwee nsogbu bu nke ulo oru ha. Ihe ọzọ dị mkpa maka bọtịnụ mmekọrịta na njikọta na - eme ka okwu ahụ sie ike - ọtụtụ n'ime ha na - agbakwa nwayọ nwayọ. Ndị mmadụ na-achọpụta. Ndị na-ege gị ntị mara. Ha anaghị atụgharị. Inwe peeji nke na-ewe ogologo oge karịa 2 sekọnd iji kwado
9 Ikuhie ndi ojoo nke n’eme ka saịtị ghara idi nwayọ
Ebe nrụọrụ weebụ na-adịghị nwayọ na-emetụta ọnụego ibiaghachi, ọnụego ntụgharị, yana ọbụlagodi njin ọchụchọ gị. Nke ahụ kwuru, ọ tụrụ m n'anya na ọnụ ọgụgụ saịtị ndị ka na-adịghị nwayọ nwayọ. Adam gosipụtara m saịtị nke taa kwadoro na GoDaddy nke na-ewere ihe karịrị 10 sekọnd iji kwado. Onye ogbenye ahụ na-eche na ha na-echekwa ego ole na ole na nnabata… kama ha na-efufu ọtụtụ ego n'ihi na ndị ahịa na-agba mbọ na ha. Anyị emeela ka ndị na-agụ akwụkwọ anyị dị elu
Aga m eme ihe n'eziokwu na enwere m mmechuihu ugbu a. Mgbe ejikwa WordPress Bochum kụrụ ahịa na ụfọdụ ndị enyi m bidoro ụlọ ọrụ ha, enweghị m ike inwekwu obi ụtọ. Dị ka ụlọ ọrụ, ike gwụrụ m ịbanye na esemokwu mgbe esemokwu na ndị ọrụ weebụ ga-enyefe anyị nsogbu ọ bụla na WordPress. Site na Bochum ejiri Bochum, onye nnabata anyị kwadoro WordPress, kachasị ya ọsọ, ma nwee atụmatụ akọwapụtara maka ijikwa niile
Ndị hackers 90,000 na-anwa ịbanye na nwụnye WordPress gị ugbu a. Nke ahụ bụ ọnụ ọgụgụ jọgburu onwe ya mana ọ na-arụtụ aka na ewu ewu nke usoro njikwa ọdịnaya ụwa kachasị ewu ewu. Ọ bụ ezie na anyị amaghị nke ọma banyere sistemụ njikwa ọdịnaya, anyị nwere nkwanye ùgwù miri emi, miri emi maka WordPress ma kwado ọtụtụ nrụnye nke ndị ahịa anyị. Anaghị m ekwenye na onye guzobere WordPress onye na-egbochikarị uche na nsogbu nchekwa na CMS.